Tsika Dzemubatanidzwa- EAC, GOST-R
ne admin pane 21-03-25
Kutakura- UN38.3 Iyo nhoroondo yekuvandudza yekufambisa kwemhepo kuongorora muChina Muna 2003, zvigadzirwa zveLithium bhatiri zvaive - zvakanyatso nyorwa muTransport yeDangerous Goods Manual yeTest and CiteriaChapter 38 Sectio .Muna 2006 iyo Flight Standards Dhipatimendi reGeneral Administration ye .. .
Chii chingaitika kana uchiramba uchidziisa iyo lithiamu bhatiri?
ne admin pane 21-01-27
Mumakore achangopfuura, mishumo yemoto uye kunyange kuputika kunokonzerwa nemabhatiriyamu eioni-ion zvakajairika.Mabhatiri eLithium-ion anonyanya kuve akaumbwa neasina electrode zvinhu, electrolyte uye yakanaka electrode zvinhu. Icho chemakemikari chiitiko cheyakaipa electrode zvinhu ...
Indian Authority yakaburitsa batch nyowani yeCRS runyorwa rwemagetsi zvigadzirwa
ne admin pane 21-01-20
Musi waNovember 11, 2020, Ministry yeIndia yeHeavy Industries uye Veruzhinji Enterprises yakaburitsa nyowani yeQuality Control Order (QCO), inonzi Electrical Equipment (Quality Control) Order, 2020. Kubudikidza neizvi, izvo zvemagetsi zvakanyorwa pazasi zvinofanirwa kutevedzera zvinoenderana. ..
Pfungwa Kuunganidzwa pane chirongwa cheIndonesian SNI muna 2020 ~ 2021
Iyo Indonesian SNI inosungirwa chigadzirwa chitupa yanga iriko kwenguva yakareba. Kune chigadzirwa chakawana chitupa cheSNI, logo yeSNI inofanirwa kuiswa mucheki uye kurongedza kwekunze. Gore rega rega, hurumende yeIndonesia inozivisa iyo SNI inodzorwa kana nyowani zvigadzirwa zvinyorwa ba ...
Pfupiso yeshanduko yeIMDG CODE 40-20 (2021)
ne admin pane 20-12-31
Amendment 40-20 edition (2021) yeIMDG Code iyo inogona kushandiswa nenzira yekusarudzika kubva 1 Ndira 2021 kudzamara zvazoita zvekumanikidzwa munaJune 1 2022. Cherekedza panguva ino yakawedzerwa yekuchinja nguva Amendment 39-18 (2018) inogona kuramba ichishandiswa . Iko kuchinja kweAmendment 40-20 ha ...
[Vietnam MIC] Iyo itsva mwero we lithiamu bhatiri inosunungurwa zviri pamutemo!
ne admin pane 20-08-13
Musi waChikunguru 9, 2020, Vietnam MIC yakaburitsa iyo yepamutemo Circular Nha. 15/2020 / TT-BTTTT, iyo yakaburitsa zviri pamutemo iyo yenyika tekinoroji mirau yetiamu mabhatiri anoshandiswa mumawoko ekushandisa mafoni, mapiritsi uye malaptop - QCVN 101: 2020 / BTTTT . Iyi Denderedzwa ichaitika kubva muna Chikunguru 1 ...
Malaysia Bhatiri Kuyedza & Certification Chinodikanwa Iri Kuuya, Wakagadzirira Here?
Bazi reDomestic Trade uye Consumer Affairs reMalaysia rakazivisa kuti zvinotenderwa kuyedzwa uye kudiwa kwezvitupa zveSekondari Mabhatiri zvichashanda kubva munaJan. 1, 2019. Zvichakadaro SIRIM QAS yakapihwa mvumo seye chete chitupa chekushandisa kuita chitupa. Du ...
Shanduko muBIS CRS maitiro - SMART Kunyoresa (CRS)
BIS yakatangisa iyo Smart Kunyoresa muna Kubvumbi 3, 2019. Mr. AP Sawhney (Secretary MeitY), Mai Surina Rajan (DG BIS), Mr. CB Singh (ADG BIS), Mr. Varghese Joy (DDG BIS) naAmai Nishat S Haque (HOD-CRS) vaive vanokudzwa pachikuva. Chiitiko ichi chakapindwawo nemamwe MeitY, BIS, CDAC, ...
Kero: 1 / F Road Nha. 13, Shiguang Road, Panyu Dunhu, Guangzhou, China